Macron wuxuu bilaabay Ololaha Madaxtinimada isagoo ballanqaaday wax ka qabashada Daroogada Faransiiska • Daroogada Inc.eu
Macron ayaa bilaabaya ololaha madaxtinimada isagoo ballanqaaday inuu ka hortagi doono daroogada Faransiiska
Madaxweynaha xilka haya ee Faransiiska ayaa bilaabay ololihiisa isagoo booqday mid ka mid ah degmooyinka ugu halista badan dalka si uu ugu ballan qaado tallaabooyin adag oo ka dhan ah kooxaha maandooriyaha.
Emmanuel Macron, oo xukunka hayay tan iyo 2017, wuxuu doonayaa inuu si dhab ah wax uga qabto wax ka qabashada dilalka baandooyinka iyo ka ganacsiga maandooriyaha-si uu u muujiyo go'aankiisa wuxuu doortay inuu booqdo Marseille, halkaas oo 11 dil oo la xiriira maandooriyaha horay loo soo sheegay sannadkan.
In kasta oo Mr Macron uu ka soo horjeedo daroogada, haddana madaxweynaha Faransiiska ayaa lagu dhaliilay in aan xoogga la saarin joojinta dagaalka ka dhanka ah daroogada ee waddooyinka. Xalka la xusay wuxuu bixin doonaa dulmar guud oo ku saabsan siyaasadda daroogada ee dalka, oo laga bilaabo xashiishadda.
Dadka Faransiiska ayaa u muuqda inay diyaar u yihiin suuqa xashiishadda sharciga ah. Iyo Macron?
Cilmi -baaristu waxay muujisay dhowr jeer in aqlabiyadda Faransiisku ay rabaan suuq xashiishad sharci ah, taas oo horseedi karta in dadku ka leexdaan rabshadaha kooxaha daroogada.
Qareenka xashiishadda Xildhibaanka Faransiiska François-Michel Lambert, ku-xigeenka LEF, ayaa cinwaanno ka sameeyay markii uu wadajirka xashiishadda ka qabtay Golaha Faransiiska.
Markaasuu wuxuu yiri: “Sharciyeynta, oo ay dowladdu maamusho, waxay oggolaan doontaa, marka lagu daro dammaanad qaadka macaamiisha alaabada la koontaroolay, inay qallajiso ganacsiga oo markaa abuurto dakhli canshuureed iyo shaqooyin. Waxaa la socon kara siyaasad ka -hortag dhab ah oo loogu talagalay dhallinyarada si loo yareeyo isticmaalka iyo khataraha."
"Waxaa laga yaabaa inaan ka walwalo kor u qaadista sharciyeynta xashiishadda. Kaliya wada shididda ayaa sidoo kale keeni karta fadeexad. ”
Wuxuu ku muujinayaa wareysiga in Faransiisku uu ka soo horjeedo Yurub, taas oo ka dhigaysa sharcigeeda ku saabsan xashiishadda mid dabacsan dhowr waddan.
Habka hadda loo wajahayo siyaasadda daroogada iyo xashiishadda ee Faransiiska, wuxuu yiri:
“Ciidankeenna amniga waxay ku bixiyaan kumanaan saacadood sannadkii inay badda ka soo saaraan shaaha si aysan waxba u tarin. Isticmaalka xashiishadda ayaa ku sii kordhaysa badeecooyin aan la xakamayn karin, oo inta badan la sinaysto oo si weyn loogu raro THC, iyada oo aan la helin siyaasad ku habboon caafimaadka dadweynaha. ”
In kasta oo dagaallada baandooyinka ee waddooyinka Faransiisku aysan ahayn wax ku saabsan xashiishadda - maaddaama dawooyinka kale laga yaabo inay ka qiimo badan yihiin ururada suuqa madow - haddii Emmanuel Macron runtii doonayo inuu wax ka qabto dhibaatooyinka daroogada ee waddankiisa, beddelidda siyaasadaha xashiishadda waxay noqon kartaa tallaabo wanaagsan oo hore.
Isbeddelku wuxuu caawin lahaa shan milyan oo qof, laga yaabee in ka badan. Kaliya booqashada Marseille si loogu muujiyo hoggaamiye xoog leh ma xallin doonto xujada - ficillada iyo go'aan qaadashadu, dabcan, way xallin doonaan.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), Faransiiska (EN), Reuters (EN), Waqtiyada (EN)
cannabisdaroogadasiyaasadda daroogadaburcad daroogadaFaransiiskasiyaasadda
Denver waxay ogolaatay inay noqoto magaaladii ugu horreysay ee lagu jaangooyo boqollaalka dhirta 'hallucinogenic'
In kasta oo ciqaabta dambiilayaashu ay khuseeyaan adeegsiga iyo haysashada boqoshaada hallucinogenic, ...
Podcast ku saabsan microdosing
Maalmahan waxaad ku sii aqrisay joornaalada, joornaalada iyo internetka: hal abuurka microdosing ...
Miyaad heshaa jajab Ritalin ah, xirmo kiniinno daraasad ah ama qadar yar oo daroogo ah ama daawooyin ah ...